Sibheka ukuklama kwendawo yokugezela, kuhlanganiswe nezindlu zangasese
Ukuzibandakanya, Design Interior
Ukulungiswa akuyona nje injabulo evela ekuvuselelweni okuzayo, kodwa futhi ukuhlupheka okuhambisana nokukhethwa kwezinto nokuklama. Yini esingayisho mayelana nokushintsha kwendlu yangasese? Ngokuvamile, leli gumbi elisendlini yiyona encane kunazo zonke, kodwa iyasebenza kakhulu, ikakhulukazi uma sikhuluma ngesindlu yokugezela, kuhlangene nesindlu yokugezela. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani abanikazi bezindawo zokuhlala zanamuhla benquma ngesinyathelo esinzima njengenhlanganisela yegumbi lokugeza nesindlu yangasese. Lesi yisifiso sokwandisa indawo yonke yokugeza ukuze kutholakale izinto ezilula ezihlanzekile, kanye nesifiso sokusindisa isikhala ngokuqeda enye yeminyango. Yiqiniso, kunezimo ezingenakwenzeka, njengokungabikho kokusebenzisa ishazi kanye nendlu yangasese ngesikhathi esisodwa. Kodwa ukuhlanganyela ekwakhiweni kwaleso project, njengokuklanywa kwezindlu zokugezela kuhlanganiswe nendlu yangasese, kunika abanikazi bayo ithuba lokubona zonke izifiso zabo nezintandokazi zabo. Manje sizodlulela ngokuqondile enkingeni yokubhaliswa kwendawo yokugezela ehlanganisiwe. Kodwa-ke, ukulandela iseluleko ngezansi kuyoba okungadingekile uma udala umklamo wendawo yangasese.
Ukufanisa iphalethi yombala. Kungakhathaliseki ukuthi yimuphi umklamo wendlu yokugezela, ehlangene nendlu yangasese, oyikhethayo, kubaluleke kakhulu ukuthi umklamo wombala wendlu yokugezela uhambisana nesisombululo esiphezulu sendawo yokuhlala. Ngaphezu kwalokho, imibala yezindonga ne-flooring kufanele ihlanganiswe.
Iningi labakhiqizi bamathayili benza yonke imizamo yokuqinisekisa ukuthi indlu yokugezela, ehlangene nendlu yangasese, umklamo ozofika kuwo, ubukeka uhambelana, ngakho-ke zikhiqiza uchungechunge oluphelele lwamathayili odonga namadonga .
Ngokuvamile, abanikazi bezindlu zokugeza ezihlangene ukuze balondoloze isikhala esikhundleni sokugeza bendabuko bafake amakamelo okugeza, okwakungathandwa yiwo wonke umuntu, ngoba ngisho noma zonke izinqubo zokugezela zikhetha ukuwasha okusheshayo, ngezinye izikhathi usafuna ukufudumala kancane emotweni ofudumele. Icala elihle kanye namacala anjalo - i-hydrobox, ukuhlanganisa imisebenzi yombili yokugezela kanye nokugeza.
Ukunakekelwa okukhethekile ngeke kuphumele ukunikeza ukuthungwa komhlaba. Noma ngabe yimuphi umklamo owaklanyelwe wendlu yokugezela, ehlangene nendlu yangasese, isembozo sangaphansi akufanele kubangele noma yikuphi ukuzwa okungathandeki kokuxhumana.
Ukufaka izitsha zangasese eziseduze ngangokunokwenzeka odongeni, kanye nokusetshenziswa kwamakamelo okugeza kanye namabhati okugqoka ekwakhiweni kuzosindisa isikhala esiningi. Khona-ke kuleli kamelo, ngaphezu kwezinto zendabuko zempahla yokuhlanza kanye nomshini wokuwasha, ungafaka iskijithali yelineni namathawula noma i-bidet. Futhi ngokuvamile, ukuklanywa kwendawo yokugezela, kuhlanganiswe nendlu yangasese, kunikeza indiza engenamkhawulo yombono wakho. Ukulondoloza isikhala ngenxa yezixazululo zanamuhla ezihambisanayo, ungafaka konke okudingayo lapha.
Umklamo wendawo yokugezela, ehlangene nendlu yangasese, kufanele futhi inikeze ukhetho olufanele lokukhanyisa. Kufanele kube yifane. Okuhlaba umxhwele kakhulu ezindlini zokugeza ezifana nezibuko ezinezibani ezakhelwe kusengaphambili.
Uma ulinganiselwe ngesikhathi noma ucabanga ukuthi awukwazi ukubhekana nomklamo wekamelo, ungaxhumana nabachwepheshe abangacabanga kalula futhi banikele okungcono kakhulu ekuklanyeni kwakho ukugezela okuhlangene, isithombe nesithombe sokuqala ongakuqonda, noma uma Udinga ukuhlunga.
Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuhlanganiswa kwezakhiwo kuyinkampani echitha isikhathi nesingozi. Ngokuvamile, abantu abaye banquma ukuhamba okunjalo ngesibindi, bajabha ngokuzikhethela kwabo futhi baphinde bahlanganyele ngezindlu zokugezela nezindlu zangasese.
Umqondo othakazelisayo ekamelweni (isithombe)
Ukufakwa okufakiwe: ukukhanyisa. Amakhansela nama-fixtures ekufakiwe okufakiwe
Sihlobisa isilingi ekamelweni labantwana
Khetha ukufakwe kwe-stretch: okuyinto engcono - i-matte noma icwebezelisayo
Ukuhlanganisa iphepha lodonga ngaphakathi: imibono, izinketho, izincomo
USergey Oborin: umethuli we-TV nomhlanganyeli we-KVN
Ugogo amazambane kuhhavini: iresiphi. Indlela ukupheka amazambane ugogo?
Izidakamizwa "Tonsilgon®": imfundo kanye nesipiliyoni siqu sokusebenza kwawo
Isobho of mackerel eqandisiwe. iresiphi
Samsung Galaxy Note 5: Uhlolojikelele, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
"Beeline" zizulazula. Ulwazi kanye nemiyalelo
Uqondeni ngephupho: Fish ukudla inhlanzi? Futhi uma udle nabo ngokwami?
Ground Turkey: isithombe, incazelo. Utshani lwensimu
UJaroslav Osmomysl: Biography, phakathi nokubusa
FGS esiswini: indlela yokwenza yonke imininingwane. Kuyeke wesabe!
Njengoba e "Maynkraft" uthole yensimbi futhi kungani kudingeka